सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको संकट तत्कालका लागि समाधान हुने देखिएको छैन । पटक-पटक अवरुद्ध भएको स्थायी कमिटी बैठक मंगलवार पनि स्थगित भएपछि नेताहरू आफैं अलमलमा परेका छन् ।
मंगलवार ११ बजेभन्दा केही अगाडि मात्र बालुवाटारबाट अर्को सूचना नआएसम्मका लागि स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भन्ने सूचना पाएका नेताहरूमध्ये कोही बाटोमा थिए भने कोही कपडा लगाइरहेका थिए । गत असार १० गतेबाट शुरू भएको पाचौं स्थायी कमिटी बैठकमा बहुमत सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीको राजीनामा माग गरेपछि विवाद झन् चुलिएको थियो ।
लोकान्तरकर्मी ईश्वर अर्यालले यिनै विषयमा केन्द्रित रही स्थायी कमिटी सदस्यद्वय गोकर्ण विष्ट र छविलाल विश्वकर्मासँग संक्षिप्त कुराकानी गरेका थिए ।
दुई जनाको मेलमिलाप र बेमेलका आधारमा पार्टी बन्धक बन्नु हुँदैन - गोकर्ण विष्ट, स्थायी कमिटी सदस्य
स्थायी कमिटी बैठक पटक-पटक स्थगित भएको छ, यसलाई 'स्थगन' कमिटी पनि भन्न थालिएको छ । यसबाट नेता तथा कार्यकर्ता पंक्तिमा कस्तो मनोविज्ञान सिर्जना भएको छ ?
हरेक समस्याको समाधान संस्थागत ढंगले खोज्ने कुराले पार्टी र आन्दोलन बलियो हुन्छ । पार्टीभन्दा जब व्यक्तिका निर्णयहरू माथि हुन्छन्, पार्टीलाई प्रक्रिया वा विधिबाट सञ्चालन गरिन्न तब यस्ता प्रकारका समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन् ।
अहिले जसरी पार्टीका बैठकहरू निरन्तर स्थगित भएका छन् यसले कार्यकर्ता पंक्तिमा नकारात्मक सन्देश गएको छ । हरेक समस्याका समाधान विधि र प्रक्रियाबाट खोजिनु नै उपयुक्त हुन्छ ।
प्रत्येकपटक बैठक स्थगित हुनुको करण अध्यक्षहरूबीच सहमति गर्नुपर्ने भएकाले भनिन्छ, यो भनेको के हो ?
पार्टीभित्र उत्पन्न समस्याहरूको सन्दर्भमा प्रक्रिया अघि बढ्छ । दुईजना नेताको मेलमिलाप या बेमेलका आधारमा पार्टी बन्धक हुनुपर्ने कुरा आन्दोलनका लागि सुखद् होइन ।
हरेक व्यक्तिहरू पार्टीको संस्थागत प्रणालीमा रहेर समाधान खोज्ने विधिलाई आत्मसात् गर्ने हो भने मात्र आन्दोलन बलियो हुन्छ र विधिसम्मत चल्छ ।
यो नेताहरूले आदर्शका कुरा मात्र गर्ने, व्यावहारिक कुरा नगर्ने । यसको ठोस समाधान यो हो भनेर नेताहरूले दिन सक्ने हो भने अलि सहज हुन्थ्यो कि ? पार्टी र आन्दोलनको भविष्यमा इमान्दार र चिन्तित हुने अवस्था उत्पन्न हुँदा मात्र पनि समस्याका समाधान सहज हुन सक्छ ।
विवाद समाधानका लागि तपाईंको व्यक्तिगत सुझाव के त त्यसो भए ?
पार्टीलाई विचार र विधिबाट सञ्चालन गर्ने कुरामा अघि बढ्न सकियो भने समस्याको समाधान खोज्न सकिन्छ । जीवन्त पार्टीभित्र अनेकन समयमा विभिन्न समस्याहरू हुन सक्छन् । तर सबै समस्याको समाधानको उपाय भनेकै विचारबाट सञ्चालन गर्नु हो ।
तपाईंहरू विधि र पद्धतिमा अड्किनु भएको छ, खासमा कुरा राजीनामामा अड्केको जस्तो देखिन्छ ?
राजीनामामै अड्केको भएपनि यसको हल के त ? विचार र विधिबाट समाधान हुनुपर्ने हो नि ! पार्टीलाई विचार र विधिगत मान्यताबाट चलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । त्यसरी नै समाधान खोज्न सकिन्छ ।
गुट–उपगुट गर्ने, छुट्टै निर्णय गरेर उता लगेर सुनाउने भन्ने खालको आरोप लागिरहेको छ प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई ?
हाम्रो मान्यता भनेको पार्टीलाई संस्थागत र वैधानिक हिसाबले सञ्चालन गर्नुपर्छ । हरेक व्यक्तिका आफ्ना अनुभव र मतहरू पार्टीभित्र प्रतिविम्बित हुन सक्छन् । पार्टी संस्थागत ढंगले चल्न थाल्यो भने हरेक प्रकारका समस्या समाधान हुन्छन् भन्नेमै केन्द्रित छौं ।
व्यावहारिक निकास के हो त त्यसो भए ?
पार्टीभित्र अनेकन समस्याहरू आउँछन् र सबै समाधान प्रणालीद्वारा समाधान भेटिन्छ ।
अन्तिममा केन्द्रीय समिति बोलाउने तयारी पनि चलिरहेको छ । स्थायी कमिटी बैठक असफल भएको सन्देश जाँदैन ?
पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक सुचारु नहुने, केन्द्रीय कमिटीको बैठक नबस्ने । पार्टीका कमिटीहरू एकदमै गतिहीन बन्ने यो अवस्थाले पार्टी बलियो हुँदैन, आन्दोलन बलियो हुँदैन । नेताहरू गम्भीर बन्न जरुरी छ ।
एउटा अध्यक्षले राजीनामा दिँदा अर्को अध्यक्षको औचित्य के होला ? - छविलाल विश्वकर्मा, स्थायी कमिटी सदस्य
स्थायी कमिटी बैठक पटक-पटक स्थगित भएको छ, यसले कम्युनिस्ट पार्टीप्रति जनतामा राम्रो म्यासेज गएको छैन, के भन्नुहुन्छ ?
अध्यक्षद्वयबीच सहमति खोज्नुपर्छ भनेरै बैठकहरू स्थगित भएका छन्, हामीले त के भन्ने हो र ?
नेताहरूबीच सहमति अपरिहार्य हो कि बैठकले नै सबै कुराको निकास दिनुपर्ने हो ? दुईथरी कुरा आइरहेको छ नि !
यसमा कसैले द्विविधा पाल्न जरुरी छैन कि पार्टीका दुवैजना अध्यक्षको बीचमा संवाद हुन जरुरी छ । समझदारी कायम हुन जरुरी छ । समझदारीका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने अहिलेको अवस्था हो ।
दुवैजना अध्यक्षहरू साविक दुईजना पार्टीका अध्यक्षको हैसियतले नेताको हैसियतले पार्टी एकता भएर समझदारीका साथ अघि बढ्ने आधार तयार भएपछि यो परिस्थितिको निर्माण भएको हो ।
दुवै अध्यक्षहरूले अविश्वासलाई विश्वासमा परिणत गर्न जरुरी छ । यो जिम्मेवारीबाट उहाँहरू पन्छिन मिल्ने ठाउँमा हुनुहुन्न ।
उहाँहरू दुवैजना अध्यक्षले गहिरो जिम्मेवारी बोध गर्न जरुरी छ । आमजनताको अभिमत के हो भन्ने उहाँहरूले बोध गर्नुपर्‍यो ।
दुईजना अध्यक्षमात्र कि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पनि ?
पार्टीका अध्यक्ष त दुईजना हो अहिले । दुईजना अध्यक्षहरू बीचमा समझदारी कायम गरी अघि बढ्नुपर्छ । वरिष्ठ नेता, सचिवालयका नेताहरूले सकारात्मक ढंगले योगदान पुर्‍याउनुपर्छ ।
सचिवालयका नेताहरूको पनि विश्वास लिएर स्थायी कमिटीमा पनि विश्वास लिनुपर्ने काम अध्यक्षद्वयकै हो । कि त अध्यक्षहरूले सकिएन भनेर हात खडा गर्नुपर्‍यो, होइन भने उहाँहरू यो जिम्मेवारीबाट दायाँबायाँ हुन पाउनुहुन्न ।
एउटा अध्यक्षको त राजीनामा माग भइरहेको छ फेरि ?
एउटा अध्यक्षले अर्को अध्यक्षको राजीनामा माग्ने, एउटा अध्यक्षले अर्को अध्यक्षका बारेमा अविश्वास गर्ने कुरा नै गलत छ । उहाँहरूले महाधिवेशनसम पार्टीलाई पुर्‍याउने जिम्मेवारी लिनुभएको हो । समझदारीका साथ देशको राष्ट्रिय राजनीतिलाई नेतृत्व लिने जिम्मेवारी लिनुभएको हो । त्यो उहाँहरूले पूरा गर्नुपर्छ ।
उहाँहरूले असन्तुष्टि पोख्ने, गुनासो पोख्ने यो बीचमा संख्याका आधारमा खेल्न खोज्ने गर्नुभयो भने इतिहासले माफ गर्नेवाला छैन । त्यो प्रश्नको जवाफ दिनका लागि उहाँहरू तयार हुनुपर्छ ।
तपाईंहरूको भूमिका के ?
मैले कुरा गरें नि, ठाउँमा भनिएको छ । स्थायी कमिटीको बैठक विषयकेन्द्रित नै भएन । कार्यसूचीमै प्रवेश गरिएन । किन प्रवेश नगरेको ? त्यो त दुईवटा अध्यक्षले जान्ने कुरा हो नि !
१६ गतेको बैठकमा त कार्यकारी जिम्मेवारीमा रहनुभएका अध्यक्ष प्रचण्डले १४ गते अर्का अध्यक्ष ओलीले बोलेको कुरालाई लिएर बैठकमा प्रवेश गराउनुभयो ।
त्यहीँ घुम्यो बैठक । कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नै पाएन । यस्तो गर्न हुन्छ ? स्थायी कमिटीलाई विषयकेन्द्रित रहेर छलफलमा लैजाने हो । घटना विशेषबाट प्रभावित भएर आक्रोशलाई आधार मानेर अगाडि बढेपछि ठाउँमा पुगिन्छ ?
दुईवटा अध्यक्षले गहिरोसँग आत्मचिन्तन गर्नुहोस् र यो समय जुन उपलब्ध भएको छ, सही ढंगले सदुपयोग गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह हो ।
अध्यक्षहरूबीच सार्वजनिक रूपमै आरोप प्रत्यारोपको शृंखला चलिरहेको छ, यसरी त कसरी होला र ?
उहाँहरू सार्वजनिक रूपमा जसरी प्रस्तुत हुनुभएको छ, धेरै गलत भयो । अहिले हामी द्विअध्यक्ष प्रणालीमा छौं । हामीले शुरू गरेको यो प्रणाली अन्य दलले पनि अपनाएका छन् । विधिसम्मत ढंगले अघि बढेका छौं ।
त्यसैले उहाँहरूले यो अभ्यासलाई सही ढंगले अघि बढाउनु पर्दैन ? एउटा अध्यक्ष नरहँदा अर्को अध्यक्षको पनि औचित्य रहँदैन । अर्काको राजीनामा माग्दा आफ्नो चाहिँ के हुन्छ नि ?
रेगुलर कार्यसूचीमा बैठक जान्छ भन्ने कन्फर्म भएपछि स्थायी कमिटी बैठक बस्छ ?
उहाँहरूको कुरा हो अब, के गर्नुहुन्छ !